शब्दकोश: सम्पादकलाई लेखिकाको पत्र
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, December 04, 2008
Basanta Gautam December 04, 2008
नौलो खालको (शुभकामना) पत्र रहेछ, निकै भावपूर्ण र रोचक पनि।
यति नितान्त निजी कुरा पनि हामीसंग पनि बाँड्नुभएकोमा धेरै-धेरै धन्यबाद!
उजेली December 05, 2008
पत्र त रमाईलो छ तर अलिकति परिवेश बुझ्न गाह्रो भयो मलाई ।
अविनाशी December 05, 2008
यो कुरा पत्ता लगाउनै पर्यो जस्तो छ गाँठे । कस्तो छुपेरुस्तम तैपनि कस्तो रमाइलो
अत्यन्तै आभारी छु सबै शुभेच्छा र कौतुहलको लागि ।
निजी कुराको थोरतिनो बेलिबिस्तार लगाउँदा सामुहिकताको न्यानोपनले छोप्दो रहेछ वसन्तजी ! र त्यसमा केही कुरा लुकाउन पाउँदा तरङ्गित पनि भईदो रै'छ ।
परिवेश खुलाउन त्यति मन नगरेको हो, र पनि जति लेख्न मिल्ने हो लेखियो जस्तो लागेको छ । बाँकी कुरा सुत्रात्मक रुपमा बुझे कसो होला उजेलीजी ?
अविनाशीजी, यति खुलाएर व्यक्त गर्दा पनि छुपारुस्तम भयो तपाईंलाई ? पत्ता लगाउने अभियानमा सरिक भएर निकालेको निश्कर्ष पहिले म नै सुन्न पाउँ है ।
रुचाउनुभएकोमा धन्यवाद !
दीपक जडित December 07, 2008
म त आउँदै पढ्दै जाँदै गर्दैछु । आज पढ्दा ३ पटक भयो तर प्रतिक्रियामा के भनेर लेख्ने भयो सँधैं र आज चैं कुनै कुरामा जस्तो महसुस हुन्छ प्रतिक्रिया त्यस्तै त लेख्ने हो नि भनेर यति लेखेँ ।
जोतारे धाइबा December 07, 2008
खास कुरा त त्यही नै त हो नि गर्नुपर्ने जडितजी ।तर किन यस्तो भएछ त आउँदै पढ्दै जाने ? जुन कुरामा जस्तो महसुस हुन्छ सोही भाव व्यक्त गर्ने त हो नि । तपाईंलाई के लेखुँ भन्ने भावले चिमोट्यो, त्यो पनि त एउटा प्रतिकृया हो । तपाईंको आँखा र मन पाएँ, यही काफी छ ।
Manbahadur December 14, 2008
Sarko Jagir Milla Jasto chha. It'saclever idea.
very intresting and artistic lagyo.